सुतिरहेको अवस्थामा चट्याङ लाग्दा झापामा एकको मृत्यु, जान्नुहोस् चट्याङबाट कसरी बच्ने - Daily Gorkhali
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सुतिरहेको अवस्थामा चट्याङ लाग्दा झापामा एकको मृत्यु, जान्नुहोस् चट्याङबाट कसरी बच्ने
बिर्तामोड । सुतिरहेको अवस्थामा चट्याङ लाग्दा झापामा शुक्रबार एक जनाको ज्यान गएको छ ।
आफ्नै निवासमा सुतिरहेको अवस्थामा चट्याङ लाग्दा ३२ वर्षीय भीम राजवंशीको मृत्यु भएको हो । उनी भद्रपुर नगरपालिका–६ नयाँबारीका बासिन्दा हुन् ।
चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएका राजवंशीको उपचारका लागि भद्रपुर लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।
चट्याङ के हो ? यसको क्षतिबाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौँ – बर्खायाम सुरु भएसँगै दैनिक रुपमा चट्याङ परिरहेको हुन्छ । चट्याङबाट धेरै धनजनको हानि–नोक्सानी हुने, मानिसका आँखामा असर गर्ने, ठूलो आवाजको कारणले कानको जाली फुट्ने, घरका सिसा फुट्ने, वन–जंगलमा आगलागी हुने, रूख–बिरुवा मर्ने, जन्तु–जनावरहरू मर्ने आदि जस्ता समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
सूर्यको तापक्रमले जमिनको सतहको तापक्रम पनि बढ्छ । यसले गर्दा पृथ्वीको सहतमा रहेको समुन्द्र, नदी, ताल, महासागरआदिबाट वाष्पीकरण विधिबाट पानीका कणहरू माथितिर उढ्दै जान्छन् । बादल जति जति माथि पुग्दै गयो त्यति नै गह्रौ हुँदै जान्छ । र बादलमा परिणत हुँदै जान्छ । यसरी धेरै नै माथि पुगेपछि अत्यधिक चिसोले गह्रौ भएको बादल तलतिर खस्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा तलबाट माथितिर गइरहेका अन्य पानीका कणहरूसँग ठोक्किन पुग्छ र घर्षण उत्पन्न हुन्छ ।
यसरी तलबाट माथितिर जाने बादलमा हुने ऋणात्मक चार्ज र माथितिरबाट तल झर्ने धनात्मक चार्जबीचको ठक्करले करेन्ट पैदा हुन्छ र चट्याङ बन्छ ।
३) बादल र जमिनबीचको चट्याङ – बादलबीचको ठक्करबाट उत्पन्न भएर जमिनसम्म आइपुग्ने चट्याङलाई बादल र जमिनबीचको चट्याङको रुपमा लिन सकिन्छ । यो निकै नै खतरनाक हुन्छ । यो पनि दुई प्रकारको छ । एउटामा बादलको तल्लो भागमा रहेको ऋणात्मक चार्ज जमिनतिर पर्छ भने अर्को माथिल्लो भागबाट धनात्मक चार्ज जमिन तर्फ खस्छ ।
सामान्यतया चट्याङ लागेका जनावर वा मानिसको मृत्यु भएको पाइन्छ । तर चट्याङमा परेर मर्ने मात्र होइन धेरै मात्रामा घाइते पनि हुने गर्दछन् । चट्याङ विशेषज्ञ शर्माका अनुसार चट्याङबाट घाइते हुने धेरैमा विभिन्न मानसिक र शारीरिक दीर्घरोग देखा पर्छन्। कोही बेहोस हुन्छन, कसैको बोली, कान र आँखा बन्द हुने, स्मरणशक्तिमा ह्रास आउने, शरीर लाटो हुने, रिँगटा लाग्ने, जोर्नी कडा हुने, मांसपेसी बाउँडिने, डिप्रेसन हुने हुन्छ ।
पानी परेको समयमा सकभर घरबाहिर ननिस्कने
घर बाहिर भएसकेसम्म चाँडो गरी घरभित्र बस्ने
घरका विद्युतीय सामानहरू जस्तैः टेलिभिजन, रेफ्रिजेरेटर, फोन आदि चट्याङ परेको समयमा प्रयोग नगर्ने
दिनको तीन बजेदेखि राती आठ बजेसम्म चट्याङ पर्ने हुनाले उक्त समयमा सकेसम्म घरबाहिरका काम नगर्ने घरभित्रै बस्ने
चट्याङ लागेर कोही घाइते भए तुरुन्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लैजाने
इथियोपियन एयरलाइन्स दुर्घटना : मृत्यु हुने नेपाली युवती गोर्खाकी एकता अधिकारी
विजय लामाले भने नेताका कारण हवाई दुर्घटना हुन्छ
सुक्रवारको दिन नागको दर्शन गर्दै देखेको ५ सेकेन्डमा दिल खोलेर १ लाईक, सेयर,कमेन्ट गर्नुहोस! आजसम्म नबनेको तपाइको काम बन्न सक्छ
नेपालमै पहिलो पटक यतिका क्षति हुनेगरी अकस्मात कसरी आयो हुरीबतास ? मौसम विद् भन्छन्…